CloseBy - Discover People 5.2.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2.4 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား လူမႈေရး CloseBy - Discover People
CloseBy - Discover People ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
✓ Discover people within 10 km radius of your location
✓ Watch nearby Instagram stories anonymously
✓ Check out tweets and Instagram posts for the latest happenings around you
✓ Send message to make new friends nearby
✓ Follow people you are interested in on Instagram and Twitter
✓ Search any place on the map to explore new friendship and events
✓ Build your local social network easily
CloseBy သင်သည်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, Instagram ကိုနှင့် Twitter ပေါ်တွင်သင်အနီး shared ပုံပြင်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့တည်နေရာအခြေပြုလူမှုမီဒီယာ App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပင် Instagram ကို, Twitter သို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးကွန်ယက် app များကိုမှတ်ပုံတင်ခံရဖို့မလိုဘဲ CloseBy ပျော်မွေ့နိုငျပါသညျ!
သင့်တည်နေရာကို 10 ကီလိုမီတာအချင်းဝက်အတွင်း✓ Discover ကလူ
အမည်ဝှက်✓စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနီးအနား Instagram ကိုပုံပြင်များ
သင်တို့ပတ်လည်နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်အပျက်များအတွက်✓ထွက် Check tweets နှင့် Instagram ကိုရေးသားချက်များ
✓ Follow ကလူကိုသင် Instagram ကိုနှင့် Twitter ပေါ်တွင်အတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်
လူသစ်အစည်းအဝေးအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လွယ်ကူသည်။
CloseBy - Discover People အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
CloseBy - Discover People အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
CloseBy - Discover People အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
CloseBy - Discover People အား အခ်က္ျပပါ
appstorize စတိုး 20.62k 4.27M
CloseBy - Discover People ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း CloseBy - Discover People အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ SG Mobile Solutions
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://sga-nearby.com/eula.html
App Name: CloseBy - Discover People
Release date: 2018-12-07 18:29:44
လက်မှတ် SHA1: CD:78:AD:45:79:9B:C1:68:E8:74:F5:60:86:23:6A:57:57:4B:57:89
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Gokhan Celikkaya
CloseBy - Discover People APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ